အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ငယ်ရွယ်နုပျို အလှပိုစေဖို့..
13 Responses to “ငယ်ရွယ်နုပျို အလှပိုစေဖို့..”
မချောပြောတဲ့နည်းလေးတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်နော် :)
မိမိကိုယ်ကို နုပျိုလှပအောင် နေထိုင်တဲ့နည်းများကို
အင်း...လှချင်လို့ မဟုတ်ပေမယ့်...ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း အထောက်ကူပြုတဲ့ စာလေးကို လေ့လာသွားပါတယ်...အေးချမ်းပါစေ...
Thank you so much for this post sis, I will try my best to look good, hehe.
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်တာဟာလည်း နုပျိုစေတဲ့ တစ်ချက် ဆိုပါလား..၊ အင်း.. ဘလော့ဂါတွေ အားလုံးက ရုပ်တွေ ခပ်ရင့်ရင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့...။းP
ခိခိ... ပြန်လာရင် မိတ်ကပ်ဖျက်မယ်... ခိခိ... :P.. မချောကိုနောက်တာ.... :D
သားမျက်နှားက အဆီနည်းနည်းပြန်တယ် ဘာမိတ်ကပ် သုံးရမလဲငှင်း))
အားလုံးအိုကေတယ် အိပ်ရေး၀၀တော့မအိပ်နိုင်သေးပါ ဘလော့ဂါဖြစ်နေသောကြောင့်...။ မမချောချောရေ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးနော်...။
အခုတော့ဆင်ခြင်ပြီချောရေ လူငယ်တွေလို စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီး အိပ်ရေးပျက်လို့ရဘူးလေး)
အသက်အရွယ်လိုက်ပြီး လှပဘို့မဟုတ်တော့ပဲ သပ်ရပ်ဘို့အတွက်ဂရုစိုက်နေရတယ်း)
ချောရေ.. ၂ ၅ ၉ ကတော့ လုံးဝကို မလုပ်ဖြစ်တာပဲ။
၁ ၃ ၄ ၇ ကတော့ အမြဲလိုလိုလုပ်ဖြစ်တယ်။
အီး ကျန်တာတွေကတော့ alternate .. ;)